रोचक बिचित्र – Page7– JanaSanchar.com
रामायणको सात सूत्र बुझियो भने दाम्पत्य जीवन सुखी र खुसी हुन्छ
यो एक वैज्ञानिक तथ्य हो कि, शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक स्तरले स्त्री र पुरुष दुबै अधूरो हुन्छ । अर्थात एकअर्कामा पूर्णता हुँदैन । जब दुबै एक हुन्छ, तव त्यसले पूर्णता पाउँछ । तर, यो पूर्णता पनि त्यसबेला मात्र मिल्छ, जब पति र पत्नीमा आपसी समझदारी, विश्वास, प्रेम, भरोसा हुन्छ । धार्मिक ग्रन्थ रामायणमा पनि पति पत्नीबीच के कस्ता गुण हुनुपर्छ..
नितम्ब ठूलो हुनुको अर्थ थाहा छ तपाईंलाई ? यस्तो छ कारण !
बीबीसी एक नयाँ अनुसन्धानका अनुसार जसको तौलको ठिक छ तर नितम्ब, जाँघ र खुट्टामा धेरै बोसो जमेको छ भने उनीहरुमा स्ट्रोक, मधुमेह र हृदयघातको आशंका कम हुन्छ । सेल रिसर्च जर्नलमा यो अनुसन्धान छापिएको छ । उक्त अनुससन्धान अनुसार जो मानिसहरुको शरिरको तल्लो भागमा बोसो कम हुन्छ उनीहरुमा हृदयरोग र मृत्युको आशंका बढि हुन्छ । यद्यपी, यो शोध मोटोघाटो..
धर्मप्रचारक बाबाहरु नै यौन धन्दामा मस्त, हेर्नुहोस यस्ता छन् घिनलाग्दा कर्तुतहरु..
यतिबेला नामधारी वावा बनेर हिडेकाहरुको कर्तुत खुल्ने क्रम जारी छ । धर्मको नाममा कालोधन्दा गर्नेहरुको कमी पनि छैन । भारतमा त त्यस्ता कैयौँ वावाहरु प्रहरीको खोरमा थुनिदैछन् । नेपालमा भने चुस्त निरीक्षणको अभावमा कैयौँ भेषधारी बाबाहरु निडरताका साथ कुदिरहेका छन् । यसै प्रसंगमा वुल्गेरियामा एकजना बाबा केही समयअघि पक्राउ परेका थिए उनी आफू..
‘फेसबुक, मेरा बच्चाहरूबाट टाढै बस
‘फेसबुकले भन्यो– केटाकेटीलाई प्रोफाइल बनाउनबाट रोक्न सकिन्न।’ चार वर्षअघि बेलायती अखबार ‘दी गार्डियन’ ले यो शीर्षकमा समाचार छापेको थियो। त्यतिबेला फेसबुक प्रयोग गर्ने कलिला केटाकेटी बढेका थिए। प्रयोगकर्ताको उमेर हद १८ भए पनि ९ देखि १२ वर्षका धेरै प्रोफाइल देखिन्थे। उनीहरूले उमेर बढाएर चलाइरहेका थिए। यसको सर्वत्र आलोचना..
५ वर्षपछि बियरले चल्नेछन् गाडी
मानिसले मादक पदार्थ सेवन गरी गाडी चलाउन पाउँदैनन् । तर निकट भविष्यमा गाडीलाई नै मादक पदार्थ सेवन गराएर चलाइनेछ ।शोधकर्ताहरुका अनुसार सन् २०२२ सम्ममा पेट्रोल डिजेलको साटो बियर हालेर गाडी चलाउन सकिनेछ । बेलायतको बि्रस्टोल विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरुले एक यस्तो प्रविधिको विकास गरेका, जसले बियर भरेर गाडी चलाउन पाइनेछ । यस प्रविधिमा..
चराहरुले किन आत्महत्या गर्छन्
छिमेकी मुलुक भारतमा एउटा यस्तो गाउँ छ जुन विश्वभरका चरा वैज्ञानिकहरुका लागि समेत रहस्यको केन्द्र बनेको छ । किनकि त्यो गाउँमा बर्सेनि ठूलो संख्यामा चराहरु आत्महत्या गर्न जान्छन् । भारतको असाम राज्यको उत्तरी काछारा पहाडी क्षेत्रस्थित जतिंगा गाउँ चराले आत्महत्या गर्ने गाउँको रुपमा परिचित छ । यो एक सुन्दर उपत्यका हो र रंगीचंगी..
‘आज राति अत्याधिक उल्का वर्षा’
पोखरा/ आज राति अत्याधिक उल्का वर्षा हुने भएको छ। मंसिर १८ देखि पुस १ गतेसम्म सक्रिय राखेर रहेको मिथुन उल्का वर्षामा बिहीबार राति अत्याधिक देखिने नेपाल खोगल समाजका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले बताए । 'अत्यधिक सक्रिय समयमा प्रतिघन्टा १२० वटासम्म उल्का देख्न सकिनेछ,' भट्टराईले भने । यो बर्ष देखिने उल्का वर्षा क्षुद्रग्रह ३२०० फेथनले सन् २००९ मा..
जानिराख्नुहोस् अण्डा पहिले आयो की कुखुरा पहिले आयो ?
केही यस्ता सवालहरु छन् जुन हामीले बच्चा देखी सुन्दै र भोग्दै आएका छौँ । तर तीनका जवाफ भने अहिले सम्म भेटिएको छैन् । ति मध्ये एउटा हो पहिले कुखुरा आयो वा अण्डा ? त्यस्तै आज हामी तपाईलाई यस्तै एउटा प्रश्नको बैज्ञानिक उत्तर दिनेछौं, जुन प्रश्न लामो समयदेखि बहसमा छ । अण्डा साकाहारी कि मांशहारी ? कयौं शाकाहारी मानिसहरु अण्डालाई मांशाहारी..
‘मृत्युपछि पनि वरिपरिका क्रियाकलाप महसुस गर्न सकिन्छ’
एजेन्सी । मृत्युपछि के हुन्छ भन्ने आजसम्म कसैले पत्ता लगाउन सकेको छैन । तर यससम्बन्धी वर्षौँ लगाएर अनुसन्धान गरिरहेको न्यूयोर्क युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिसिनले नयाँ खुलासा गरेको छ । उनीहरुको टीमले लामो समयदेखि यसको अध्ययन गरिरहेको थियो । त्यसैक्रममा उनीहरुले मरेपछि पनि केही समयका लागि मृत मानिसले वरिपरि भइरहेका घटनाको आभास गर्न..
दुध पिएर नसकेको भन्दै पिताले ३ वर्षीया छोरीलाई अन्धकार रातमा घरबाट बाहिर निकाले
दुध पिएर नसकेको भन्दै पिताले ३ वर्षीया छोरीलाई अन्धकार रातमा घरबाट बाहिर निकालेका थिए। पिताले घर निकाला गरेकी ती बालिका दुई हप्तादेखि वेपत्ता भएकी थिइन्। प्रहरीले फेला पारेको एक बालिकाको शव उनै वेपत्ता बच्चीको भएको आशंका गरेको छ। यो घटना अमेरिकाको हो। दुई वर्ष पहिले ती पिताले भारतको एक अनाथालयबाट धर्म पुत्रीका रुपमा उनलाई लिएर गएका..